Barnaamijyo | Radio Kaah
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (04-02-2021).
February 4, 2021 February 4, 2021 - by Radio Kaah - Leave a Comment
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (03-02-2021).
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (02-02-2021).
February 2, 2021 February 2, 2021 - by Radio Kaah - Leave a Comment
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (01-02-2021).
February 1, 2021 February 1, 2021 - by Radio Kaah - Leave a Comment
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (26-01-2021).
January 26, 2021 January 26, 2021 - by Radio Kaah - Leave a Comment
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (25-01-2021).
January 25, 2021 January 26, 2021 - by Radio Kaah - Leave a Comment
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (24-01-2021).
January 24, 2021 January 24, 2021 - by Radio Kaah - Leave a Comment
DHAGEYSO: Barnaamijka Xulka Wararka & Wareysiyada (23-01-2021).
January 23, 2021 January 24, 2021 - by Radio Kaah - Leave a Comment
Barnaamijyo / wararka
DHAGEYSO: Barnaamijka Shaandheynta Dhacdooyinka Caalamka (29-8-2020)
August 29, 2020 August 29, 2020 - by Radio Kaah - Leave a Comment
Dhageystayaasheena Sharafta Leh waxaan idiin soo gudbineynaa Barnaamijka Shaandheynta Dhacdooyinka Caalamka oo aad Idaacada kaah ka dhageysataan Maalin Walbo Saacadu markii ay tahay 2:30 Duhurnimo marka laga reebo Maalinta Jimcaha …